Lioka 10: 1-42
Lioka 9 Lioka 10 Lioka 11
Aza mitondra kitapom-bola, na kitapom-batsy, na kapa; ary aza miarahaba olona akory eny an-dàlana.
Ny vovoky ny tanànanareo aza, izay miraikitra amin'ny tongotray, dia fafanay hiampanga anareo; nefa aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra.
Lozanao, ry Korazina, lazanao, ry Betsaida! Fa raha mba tany Tyro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho nibebaka ela izy ka nitafy lamba fisaonana sy nipetraka amin'ny lavenona.
Ary hianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va hianao? Haetry hatrany amin'ny fiainan-tsi-hitahianao.
Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan'ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory.
Kanefa aza mifaly hianareo, satria manaiky anareo ny fanahy; fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo.
Ary tamin'izany ora izay dia ravoravo tamin'ny Fanahy Masina Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko ô, Tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika; eny, Raiko, fa izany no sitrakao.
Fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo, fa tsy nahita, ary naniry hahare izay renareo, fa tsy nahare.
Ary hoy Izy taminy: Inona no voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana no famakinao azy!
Ary izy namaly ka nanao hoe: Tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ( Deo.6.5); ary Tiava ny namanao tahaka ny tenanao( Lev.19.18).
Ary hoy Jesosy taminy: Marina ny navalinao; ataovy izany, dia ho velona hianao.
Ary Jesosy namaly ka nanao hoe: Nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema hankany Jeriko ka azon'ny jiolahy, dia nendahany ny lambany, sady nokapohiny izy, dia nilaozany rehefa saiky maty.
Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany làlana izany; ary raha nahita an-dralehilahy izy, dia nandalo azy.
Ary hoy izy: Ilay niantra azy. Dia hoy Jesosy taminy: Mandehana hianao, ka mba manaova toy izany koa.
Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe: Marta, Marta, maro ahina sy maro herehina hianao;